-Magaalada Abu-Dhabi waxa shalay ka dhacay kulan saddex geesood ah oo dhexmaray madaxda, Imaaraadka, Ethiopia iyo Eritrea. Wuxuu gunaanad u ahaa dedaal aan si rasmi ah loo garanayn cidda dabada ka riixaysay oo ay ugu dambayn labadan wadan ku saxeexeen heshiis taariikhda galay. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
-Magaalada Abu-Dhabi waxa shalay ka dhacay kulan saddex geesood ah oo dhexmaray madaxda, Imaaraadka, Ethiopia iyo Eritrea. Wuxuu gunaanad u ahaa dedaal aan si rasmi ah loo garanayn cidda dabada ka riixaysay oo ay ugu dambayn labadan wadan ku saxeexeen heshiis taariikhda galay.
Allhadaaftimo July 25, 2018 July 25, 2018 Uncategorized
Magaalada Abu-Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta waxa shalay ka dhacay kulan saddex geesood ah oo dhexmaray madaxda, Imaaraadka, Ethiopia iyo Eritrea. Wuxuu gunaanad u ahaa dedaal aan si rasmi ah loo garanayn cidda dabada ka riixaysay oo ay ugu dambayn labadan wadan ku saxeexeen heshiis taariikhda galay.
Previous Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Sland Ayaa Ka Hadlay Xeerka Doorashooyinka
Next WAKIILKA QARAMADA MIDOOBAY EE SOOMAALIA OO MADAXWAYNAHA PUNTLAND KALA HADLAY XAALADA TUKARAQ